admin October 3, 2018 समाज 0
फौजदारी कसुरको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रहरीको मुख्य कर्तव्य अपराधी उम्किन नदिन घटनाको दसी प्रमाण सुरक्षित राख्नु हो । तर, कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा प्रहरीको भूमिका ठीक उल्टो देखिएको छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ । न्याय माग्न राजधानी आइपुगेका निर्मलाका बावुआमा र कञ्चनपुरका महिला अधिकारकर्मीहरूका अनुसार निलम्बित एसपी डिल्लीराज विष्ट र उनी मातहतका प्रहरीले योजनाबद्ध रूपमै प्रमाणहरू नष्ट गरेको देखिन्छ ।
CCTV फुटेजमा कैद छन् निर्मलाका हत्यारा! तर किन अहिलेसम्म रिकभर गरिएकाे छैन डाटा?
खुल्यो रहस्य : आफ्नै मामाले अपराधीलाई लुकाएको खुलासा – भिडियो हेर्नुहोस
आमाको हेरचाहमा तं’ग्रिदै चम्सुरी तर नि’को हुने आ’शमा था’मिएनन् आँसु !